Baadhitaanka Bukaanka ee Caafimaadka Xoolalaha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so, May 13, 2018
Afrikaan.so, January 31, 2018
Waxa si aynu si faahfaahsan daryeeelayaasha caafimaadka xooluhu ugu baran doonaan sida loo baadho bukaanka iyo qaababka kala duwan ee lagu ogaan karo nooca uu yahay xanuunku mid ku bilawday.
Afar qaybood oo waawayn ayaa la tixraacaa marka la doonayo in la ogaado nooca xanuun ee bukaanka haya iyo halka uu ka bilawday.
1. In aynu waraysi la yeelano mulkiilaha neefka buka
Marka aynu ka hadlayno qaybtan koowaad waxa muhiim ah in mulkiilaha bukaanka la waydiiyo su’aalo kala duwan sida, deegaanka uu degen yahay? Daaqa uu neefka siiyay? Muddada uu xanuunku hayay neefka? In ay jiraan xoolo kale oo uu xanuunkani ku dhacay? Astaamaha xanuun ee uu ku arkay bukaanka? Iyo su’aalo kale oo la mid ah si aad u ogaato macluumaad ku saabsan xanuunkan.
2. In si fiican looga bogto bukaanka iyada oo la adeegsanayo isha
Marka aad qodobka koowaad ee xog waraysiga ah ka soo gudubto waxaad si degen neefka uga fiirinaysaa dhamaan dhinacyadiisa, adiga oo bartilmaameed-sanaya socodka, calaaliska neefka, isbedel ku yimi culayska bukaanka ama caataw, taagnida, dhogorta, in ay jiraan wax dareerayaal ahi sida, saxaro ama dheecaano kale oo afka iyo sanka ahi.
3. In gacanta loola tago bukaanka
Marka aad intaas ka soo gudubto waxa kula gudboon in aad bukaanka gacanta ula timaado isla markaasna aad taabato qanjidhada iyo hadii ay jiraan meelo kale oo neefka bararsani, sidoo kale in aad dhagaysato garaaca wadnaha, xadiga neef-tuurka bukaanka, sidoo kale in aad ka baadho nabaro qarsoon bukaanka, in aad furto afka, cirridada iyo in aad fiiriso dhamaan dareemayaasha bukaanka.
Waxa la adeegsan doonaa Thermometer si loo cabiro heer-kulka bukaanka, iyada oo laga cabiri doono dabada (anus) bukaanka.
4. Qaaditaanka shaybaadh lagu kalsoonaan karo
Qaybta u dambaysa ee baadhitaanka bukaanku waxa ay ka kooban tahay laba qaybood oo kala ah in laga qaado bukaanka shaybaadh (laporatory examination) iyo in la qalo bukaanka isla markaana si hufan loo baadho hillibka neefka iyada oo laga eegaayo isbedelada xannuunku ku sameeyay qaybaha kala dawan ee jidhkiisa (post-mortem examination ).
Tani waa qayb aad u muhiim ah isla markaasna u baahan aqoon iyo hawl adag sidaas daraadeed inta badan looma raaciyo casharadan kooban ee loogu talo galay in ay qaataan daryeelayaasha caafimaadka xooluhu.
Tags: Baadhitaanka Bukaanka ee Caafimaadka Xoolalaha
Next post Xisaabinta Ilkaha Neefka iyo Da’da
Previous post Maxaa Looga Baahan Yahay Daryeelayaasha Caafimaadka Xoolaha?